nepal stock exchange(nepal stock exchange) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । एकातिर सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेर लगानीकर्ताहरु निराशसँगै अन्यौलमा परेका छन्। अर्कोतिर सेयर बजार नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रविधिले धोका दिँदा लगानीकर्ता थप प्रताडित बन्न पुगेका छन्। नेप्सेको प्रणालीमा देखिने समस्याले आमलगानीकर्तामात्र होइन सेयर बजारको गतिविधि नजिकबाट नियाल्नेहरु पनि हैरान हुन...
आ.व. २०७७/७८ मा नेप्सेमा उछाल, कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेप्से परिसूचकमा उछाल आएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म नेप्से सूचकांक वार्षिक विन्दुगत आधारमा २८८३.४ को विन्दुमा पुगको थियो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १११.६ प्रतिशतले...
चन्द्रसिंह साउद भन्छन्–‘केही झमेला छन्, त्यसैले सेबोनको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिइनँ’
काठमाण्डौ । नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षका लागि १२ जना आकांक्षीको आवेदन परेको छ। सेबोनको अध्यक्ष पदमा नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) को सीईओबाट राजीनामा दिएका चन्द्रसिंह साउदको पनि आवेदन पर्ने आमलगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका थिए। सर्वोत्तमको सेयरको भित्री कारोबार प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि मुछिएसँगै सीईओको पदबाट राजीनामा...
प्रभु बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेड सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) प्रभु बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो। हिजो बिहीबार नेप्सेले कारोबार समयमा प्रभु बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश घोषणा गरेको भन्दै प्रभु बैंकको सेयर कारोबार रोक्का राखेको थियो। सेयर कारोबार रोक्का गर्नुका साथै नेप्सेले त्यसो गर्नुको...
नेप्सेद्वारा प्रभु बैंकको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रभु बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ। नेप्सेले बैंकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय सोही दिन गराएता पनि कारोबार समय खुल्नुअघि जानकारी नगराएको र सोही दिन कारोबार समय दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म बैठक बसी धितोपत्रको कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी सर्वसाधारणलाई...
आज सेयर बजार बन्द रहने
काठमाण्डौ । सेयर बजार आज बुधबार बन्द रहने भएको छ। आज छठको सार्वजनिक बिदा परेको सेयर बजार बन्द रहने भएको हो। सेयर बजार अब भोलि बिहीबार खुल्नेछ। यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार पनि सेयर बजार बन्द रहेको थियो। आइतबार तिहारको बिदा दिइएको थियो। सेयर बजार सोमबार र मंगलबार खुलेको थियो। यी दुवै दिन बजार ओरालो लागेको थियो। ...
‘बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेयर बजारमै लगानी गर्नु उचित’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आफ्नो आशय सेयरमा लगानी गर्नै हुन्न भन्ने नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिजशालाकर्मीसँग पोखरास्थित आफ्नै निवासमा कुराकानी गर्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले यस्तो स्पष्टोक्ति दिएका हुन्। ‘यदि तपाइँले बचतको पैसाबाट कमाउन चाहनुहुन्छ भने...
तिहारमा यी दिन सेयर बजार बन्द रहने, कहिलेदेखि खुल्छ ?
काठमाण्डौ । नेपाली अर्को महान चाड तिहार भोलि (कात्तिक १७ गते) बाट सुरु हुँदैछ। भोलि अर्थात कात्तिक १७ गते काग र कुकुर तिहार एकैदिन परेको छ। कात्तिक १८ गते लक्ष्मीपूजा, कात्तिक १९ गते म्हपूजा/गोबर्द्धनपूजा र कात्तिक २० गते भाइटीका परेको छ। सेयर बजार पनि कात्तिक १७ गतेसम्म खुला रहनेछ। कात्तिक १८ गते अर्थात लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि बजार...
बजारमा दोहोरो अंकको करेक्सन, विश्लेषक भन्छन्–‘अब नयाँ जोश आउने भो’
काठमाण्डौ । अघिल्लो साता लगातार बढेको बजार यो साताको दोश्रो कारोबार दिन भने करेक्सनमा गएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक १७.७५ अंकले घटेर २८१९.८६ अंकमा सीमित बन्न पुगेको हो । यो दिन कारोबार रकम भने बढेर ८ अर्ब नजिक पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले सोमबारको बजारमा कारोबारले साथ दिएको र यो दिन नेप्सेको घटाई...
नेप्सेबाट प्रमोटर सेयरको बिक्रीमूल्यको स्वीकृति दिन ढिलाइ भएको आरोप
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । साधारण सेयरजस्तो प्रमोटर (संस्थापक) सेयर बेच्ने प्रक्रिया सहज छैन। लगानीकर्ताले आफूसँग भएको प्रमोटर सेयर बेच्न सर्वप्रथम कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ। दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएमा कम्पनीको सञ्चालकहरुले स्वीकृति दिए पुग्छ। दुई प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति आवश्यक पर्छ। कम्पनीले ३५...
बजारमा उछाल, विश्लेषक भन्छन्–‘केही दिन करेक्सन आउला, त्यसपछि निरन्तर बढ्छ’
काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले बैंकहरुको ‘ब्याजदर युद्ध’मा हस्तक्षेप गर्दै ३ बुँदे सर्कुलर जारी गरेसँगै बजारमा उछाल आएको छ । बुधबार नेपालको सेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक नेप्से इण्डेक्स ६०.५६ अंकले बढेर २५७१.६६ अंकमा फर्किएको हो । कारोबार सुरु भएदेखि नै उछालको गतिमा दौडिएको बजार केही मिनेटमै बढेर २५९० माथि पुगेको थियो । पछि फेरि...
काठमाण्डौ । अनपेक्षित रुपमा बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि त्यसले सेयर बजारको गतिलाई सुस्त बनाइदिएको छ । दशैंपछि खुलेको बजार सोमबारदेखि तीव्र गतिमा घट्न थालेको थियो । मंगलबार पनि बजारमा भीषण पहिरो गयो । एकपछि अर्को गर्दै बजार भीषण पहिरोको गतिमा घट्न थालेपछि नयाँ र साना मात्र नभई ठूला लगानीकर्ता पनि अत्तालिएका छन् । बैंकहरुको...
काठमाण्डौ । मंगलबार पनि बजारमा भीषण पहिरो गएको छ । बजार खुलेदेखि नै घट्न थालेको नेप्से कारोबार सुरु भएको २ घण्टा अर्थात १ः०३ बजेसम्म ९२ अंक(३.५५ प्रतिशत) हाराहारीमा घटेर २४९६ को विन्दूमा सीमित बन्न पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकले ल्याएको सीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण परेको संकट टार्न र आफ्नो पोर्टफोलियो...
ठूला बैंकले ब्याजदर घटाउँदा उचालियो बजार, विश्लेषक भन्छन्–‘बजारले निहुँ पायो, अब दौडिन्छ’
काठमाण्डौ । समग्र बैंकिङ उद्योगमा ठूलो मार्केट सेयर ओगटेका वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि त्यसको सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । वाणिज्य बैंकमध्ये केहीले आइतबार बिहानै असोजको तुलनामा कात्तिकका लागि घटेको ब्याजदर प्रकाशित गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटेर प्रकाशित गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव...
पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएर भारतले नयाँ मूल्यसूची पठायो, आयल निगमले भने नघटाउने
विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढ्दा तेह्रथुम पावर नाफामा, ईपीएस कति ?